खबरदार ! अब आचरण र कार्यशैली फेर्नु पर्छ – Ganesh K Paudel
खबरदार ! अब आचरण र कार्यशैली फेर्नु पर्छ
देशभर लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि व्यापक रूपमा प्रदर्शन भएपछि अन्ततोगत्वा राजाको बन्दूकले हार खाएको छ। सात राजनीतिक दलहरूको अगुवाई र नेपाली जनताको सकृय सहभागितामा भएको संयुक्त जन आन्दोलनले २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना भएको छ।
लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुवै लक्ष्य लिएर हिँडेका नेपाली जनताहरूलाई अब पुनर्थापित संसदले सात दलको रोडम्याप अनुसार लिने निर्णयले डोहोर्‍याउने छ। रोडम्यापमा अघि सारिएका संविधानसभाको निर्वाचन लगायतका विषयहरूलाई संसदले पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ।
विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न एक पक्षीय युद्धविराम तत्काल घोषणा गरिनुपर्छ र माओवादीलाई सम्वादमा ल्याई उनीहरूको हतियार व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ र उनीहरूलाई पनि मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु पर्दछ।
लोकतन्त्रमा जनताको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ। बंश परंम्परा अनुसार विरासतमा पाएको सिंहासनले यसमा कुनै दख्खल दिन पाउँदैन। देशभर गणतन्त्रको नारा घन्किसकेको छ, यस विषयलाई हृदयंगम गरी आफ्नो मर्यादा कायम राख्न नसके राजसंस्थाको भविष्य कुनै निश्चित छैन। जनताले राखे राजतन्त्र रहने हो, जनताको माया नै नगर्ने राजतन्त्रको जनतालाई के माया?
यता राजाको प्रतिगमनको मतियार बनेर हालीमुहाली गर्ने, जनतालाइ दमन र चरम यातना गर्ने, मन्डले आततायी मच्चाउने पंचायती भूतहरूको स्वाहा गर्न तथा तिनीहरूलाई अब कहिल्यै उठ्न नसक्नेगरी थला पार्न नेपाली जनताहरू अग्रसर भएका छन्। पञ्चायतको अन्त्यसंगै गठीत मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन अनुसार र अहिलेका अपराधहरूको समेत अध्ययन गरी तिनीहरूलाई कारवाही हुनैपर्छ।
जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने, अंगभंग हुने योद्धाहरू र तिनका परिवारलाई राज्यले बिर्सनु हुन्न। उनीहरूलाई उचित क्षतिपुर्ति तथा भत्ताको व्यवस्था गरी स्वतन्त्रताको योद्धाको सम्मान गर्नै पर्छ। दमन गर्न गोली ठोक्ने निर्देशन दिने कमल थापा होस् वा गोली ठोक्ने माधव थापा होस् वा अन्य दमनकारी सुरक्षा अधिकारी होस् जनताले कठघरामा उभ्याउनु पर्छ। ०४७ सालमा झैं माफ गर्दै जाने हो भने उनीहरूको मनोबल अझ बढ्छ।
सरकारी संचार माध्यम र सरकारी श्रोत साधनको दुरूपयोग गरी नाङ्गो नाच नाच्ने मन्डले पत्रकारहरू आजैदेखि आफूलाई प्रजातन्त्रको सच्चा पहरेदार भनाउन थालेका छन्। उनीहरू लोकतन्त्रका नेताहरूलाइ गुलामी पनि गर्न थालेका छन्। सबैभन्दा पहिले यीनलाई ठेगान लगाउनु पर्दछ। प्रजातन्त्रका लागि सबैभन्दा बढी खतरा यीनीहरूबाटै छ। नेताहरूको चाप्लुसी गरेर भोली देशको उच्च ओहोदामा फेरी यीनीहरूनै पुगे भने जनताहरूले धिक्कार्लान्।
तत्कालिन सांसदहरूको बानी बेहोरा र गतिविधि एवं कार्यशैलीले हामी सबैलाई खिन्न नतुल्याएको हैन। यसबाट तेश्रो पक्षले फाइदा उठाएको र प्रतिगमन भएको कुरा नविर्सी अब सांसदहरूले बानीबेहोरा सुधार्ने छन् भन्ने सबै नेपालीले आशा गरेका छन्। यदि त्यस्तो भएन भने उनीहरूलाइ जनताले लोप्पा ख्वाउने छन्।
अब आफ्नो आचरण सुधार्नुहोस्। आफ्नो सुविधा होइन जनसाधारणको सुविधा तर्फ ध्यान दिनुहोस्। घरको होइन, देशको समस्या समाधान गर्न थाल्नुहोस्। जनता शान्ति, सुरक्षा र रोजगारी चाहन्छन, अस्थिरता र महंगीबाट राहत पाउन चाहन्छन्। समुन्नत नेपाल बनाउने उनीहरूको सपना छ। उनीहरूको सीप, जाँगर र मेहनतको उचित मूल्य दिलाउन प्रयत्न गर्नुहोस्। कुर्सी मात्र समातेर हुँदैन द्वन्द समाधान गर्न कुर्सी छोड्न पनि तयार हुनुहोस्।
अलिकति टसमस भएमा जनताले तपाँइलाई छोड्ने छैन, बलिदानी जनताको रगतले तपाँइलाई छोड्ने छैन। *********
ज्ञानेन्द्रको हठका कारण राजतन्त्रको अन्त्य
श्री ५ को मुटुमा ढ्याङ्‌रो ठोक्योः आन्दोलनकारीको ललकार ‘अवसानका लागि तयारी गरे हुन्छ’